एक कार कसरी बेच्न?
त्यसैले तपाईं आफ्नो चार-wheeled साथीसँग भागमा निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईं पहिलो पटक आफ्नो कार बेच्न भने, तपाईं प्रश्न, संग चिन्तित हुनुहुन्छ भएको बेच्न कसरी यसको लागि कार पैसा र प्राप्त, छैन समस्या। समय गर्नेहरूलाई छोडूँगा र इच्छा सकेसम्म फलाम घोडा को छुटकारा प्राप्त गर्न को लागि, सबै भन्दा राम्रो विकल्प सवारीसाधन बजार मा एक खरीदार खोजी गर्न हुनेछ।
त्यहाँ राम्रो तपाईं calmer हुनेछ त्यसैले, एक भरपर्दो व्यक्ति मिलेर जाने हो, र अनुभव धेरै सजिलो यस संस्करणमा खरीदार सम्भ्काउनु गर्न भनेर देखाउँछ। एक कार कसरी बेच्न, कार शरीर आदर्श राज्य दिइएको छ भने विज्ञान थाह छैन। खरोंच र खियाले गर्न allusions पूरा अभाव, साथै ताजा चमकाने सही प्राविधिक अवस्था राम्रो साथै हुनेछ भनेर, लुगा त्यस भेट्नु सम्झना।
हामी अनुभवी विक्रेता थाह गर्न व्यवस्थापन भने तिनीहरूलाई प्रश्न नहिचकिचाउनुहोस्। तिनीहरूले तपाईंलाई बताउन सक्नुहुन्छ कति चाँडो त्रुटिहरू सबैभन्दा धेरै newcomers र पनि अधिक उत्पन्न जो कार, बेच्न।
बजार मा स्थान केही खरीदारों ठेगाना subconsciously विश्वास रूपमा, केन्द्र क्षेत्रमा लिन प्रयास गर्न आवश्यक छ कि पल्टाइदिनुभयो, utopshie, आपतकालीन क्रममा केही छ कि सामान्य Huddle मिसिन को टाढा कुनामा मा। र एक trifle जस्तै, एक मोटर तेल दाग वा अन्य कुनै पनि तरल पदार्थ को पोखिन्छ को अभाव प्रमाणित गर्न amiss हुन छैन, तर ग्राहक तर्साउन सक्छ।
यी सरल सिफारिसहरू पूरा गरेपछि, तपाईं चाँडै पर्याप्त राम्रो हात आफ्नो कार दिन सक्षम हुनुपर्छ, र तिनीहरूले उपयुक्त अनुभव थियो गरेपछि आफूलाई आफ्नो साथीहरूलाई कसरी एक कार बेच्न।
तर के अझै पनि तपाईं आफ्नो Swallow तपाईं बजार नाश र बेच्न बिल्कुल कुनै समय छ भने आवश्यक? हामी तपाईं के गर्न धेरै छ भने, एक कार बेच्न कसरी कुरा हुनेछ र यो लेखको दोस्रो भाग मा केही दिन बनानु गर्न असम्भव छ।
यस मामला मा, तपाईं विशेष इन्टरनेट साइटहरु को सेवाहरू प्रयोग गर्न राम्रो थियो। को शैली मा Google वा Yandex कुरा मा डायल "इन्टरनेटमा आफ्नो शहर मार्फत एक कार बिक्री।" तपाईं आफ्नो पृष्ठ एक प्रयोग वाहन विक्रेता टाउट विभिन्न वेबसाइटहरूको प्रशस्त हैरानी गरिनेछ।
केही मिनेट खर्च दर्ता गर्न, तपाईंले आफ्नो विज्ञापन पोस्ट र यो एउटा रोचक आफ्नो सुन्दर मिसिन को गुणवत्ता तस्वीर पाठ-विवरण थप्दा गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क लागि मान्य फोन नम्बर समावेश गर्न पक्का हुनुहोस्।
यसलाई अहिले ग्राहक बाट कल लागि प्रतीक्षा रहनेछ। एकदम अक्सर, अन्य चल्ने वा immovable सम्पत्ति कार साझेदारी प्रस्ताव म निरर्थक कलहरू समय बर्बाद र तुरुन्तै अड्किनुहोस् छैन सल्लाह।
एक गम्भीर खरीदार, कार देखेर बिना पनि एक सम्झौता हुन असम्भाव्य छ, तर खरीदारों जरुरी कार बिक्री यो पाप निरन्तर भनेर नबिर्सनुहोस्।
सन्तुष्ट छ सम्भाव्य ग्राहक कुरा गर्दा दुई पक्ष, एक नियुक्ति बनाउन घर देखि टाढा एक बिन्दु चयन गर्न, कार ग्यारेज बाट दूर Windows तल रात बिताउनुहुन्छ भने, वा, यदि तपाईं HSC मा राख्न आवश्यक छ। जहाँ तपाईं कुनै पनि परिस्थितिमा रात आफ्नो कार छोड्न सभामा नै तपाईं ठ्याक्कै बताउन पर्छ।
को अपहरणकर्ताहरूलाई, खरीदार प्रदान पत्ता लगाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई के कार अलार्म सिस्टम, जहाँ यसलाई भण्डारण छ, ग्यारेज मा लक गर्दछ जो, आदि को प्रकारको त्यसैले के पैसा पहिले नै भुक्तानी भएको छ जब मात्र गरिएको, र अघि विरोधी चोरी प्रणाली देखाइएको गर्नुपर्छ।
यो बेला उनको अवस्था निदान गर्न सेवामा एक कार खरीद फिर्ता लिन सुशील भएको छ। तपाईंले यो सामान्य खरीदार प्रतिरोध गर्नु हुँदैन। तर, पहिलो, कार को राज्य को निरीक्षण को सबै सेवाहरू यस स्थिति जाँच गर्न चाहन्थे जो एक को लागि, कुनै यात्राको को ग्यारेज वा अज्ञात सेवामा खरीदार को मित्र तिर्न पर्छ, र दोश्रो "अंकल Vanya देखि।" तपाईंको फलाम घोडा गैर-अवस्थित कमजोरीहरू एक गुच्छा पाउन सक्नुहुन्छ छ। मात्र ब्रांडेड सेवा स्टेशन, जो निरन्तर आफ्नो ब्रान्ड नाम संग काम, प्राथमिकताको अधिकारीहरु।
सबै प्रश्नहरूको खरीदार गायब, र उहाँले अझै पनि आफ्नो कार किनेको भने, अब तपाईं बस दर्ता पछि तीन वर्ष भित्र बिक्री को लागि कागजातहरू राख्न छन्।
खैर, अब तपाईं एक कार कसरी बेच्न थाहा छ, र तपाईं पैसा बिना रहन चाहँदैनन् भने म, भन्नुहुन्छ अन्तिम कुरा हो, कुनै पनि प्रस्ताव सम्झौता "धो" इन्कार गर्छन्।
कार वक्ता "अग्रगामी"
तरल ग्लास जाडो र गर्मी: समीक्षा, संरचना। उत्पादन गाडीको अगाडीको शिशा तरल पदार्थ
को निसान Teana को समीक्षा पढेर त्यहाँ पूर्णता कुनै सीमा छ कि विश्वस्त
को रियर शक कसरी?
"Dota 2" मा Tarasco Bots गर्ने बारे विवरण
रात हिँड्छ: बच्चाहरु मा sleepwalking
ओपरेटिव उपनाम भूल गर्दा
आध्यात्मिक गतिविधि र यसको परिणाम एक सिम्बायोसिस रूपमा आध्यात्मिक संस्कृति
अङ्गुर phylloxera: कारण र नियन्त्रण उपाय
तेल वाल्व कवर बाहिर बग्छ। तेल लीक - के
फिल्म "Crumbling को साहसिक": अभिनेताहरु को sixties को साना पुस्ता प्रतिनिधित्व